Mask တွေကို စနစ်တကျတပ်ပြီး စွန့်ပစ်ကြဖို့ ချစ်စဖွယ်ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ သရုပ်ပြလာခဲ့တဲ့ ခေတ်နဲ့သစ် - Cele Connections
အဆိုတော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ရဲ့အိမ်ဂေဟာလေးကတော့ အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးတွေကြောင့် အမြဲလိုလို ရယ်မောသံတွေနဲ့ ဆူညံနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ​​​မေမေ ချစ်သုဝေက ခေတ်လေး၊ သစ်​​လေးတို့နဲ့အတူ အိမ်မှာပဲနေရင်း ဖောင်ဒေးရှင်းအလုပ်တွေကို ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆရာဝန်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ ချစ်သုဝေက ပြည်သူလူထုအတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပေးချက်တွေကို ပြောပြပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ချစ်သုဝေရဲ့ သမီးလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်ကို ချစ်စဖွယ် အဝတ်အစားနဲ့ Mask လေးတွေ ဆင်ပေးရင်း “Maskတပ်ကြပါ..စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ကြပါ.. အကျအန မေးစေ့မှာလည်းမချိတ်ရ! COVID 1st wave အစ ကတည်းကပုံလေးတွေပါ😍” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေလာပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ခေတ်နဲ့သစ်ရဲ့ ချစ်စဖွယ်ပုံရိပ်လေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ခေတ်လေးနဲ့ သစ်လေးကတော့ ဦးဦးဒေါ်ဒေါ်၊ ကိုကို မမတွေကို Mask တွေကို စနစ်တကျတပ်ပြီး စွန့်ပစ်ကြဖို့ ချစ်စဖွယ်ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ သရုပ်ပြလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ခေတ်လေးနဲ့ သစ်လေးလို Mask ကို စနစ်တကျ တပ်ပြီး၊ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Mask တှကေို စနဈတကတြပျပွီး စှနျ့ပဈကွဖို့ ခဈြစဖှယျပုံရိပျလေးတှနေဲ့ သရုပျပွလာခဲ့တဲ့ ခတျေနဲ့သဈ
အဆိုတျောတှဖွေဈကွတဲ့ လငျးလငျးနဲ့ ခဈြသုဝတေို့ရဲ့အိမျဂဟောလေးကတော့ အရမျးကို ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးလေးတှကွေောငျ့ အမွဲလိုလို ရယျမောသံတှနေဲ့ ဆူညံနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ လတျတလောမှာတော့ မမေေ ခဈြသုဝကေ ခတျေလေး၊ သဈလေးတို့နဲ့အတူ အိမျမှာပဲနရေငျး ဖောငျဒေးရှငျးအလုပျတှကေို ဦးစီးလုပျကိုငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဆရာဝနျတဈယောကျလညျးဖွဈတဲ့ ခဈြသုဝကေ ပွညျသူလူထုအတှကျ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ အသိပေးခကျြတှကေို ပွောပွပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာတော့ ခဈြသုဝရေဲ့ သမီးလေးနှဈယောကျဖွဈတဲ့ ခတျေနဲ့သဈကို ခဈြစဖှယျ အဝတျအစားနဲ့ Mask လေးတှေ ဆငျပေးရငျး “Maskတပျကွပါ..စနဈတကြ စှနျ့ပဈကွပါ.. အကအြန မေးစမှေ့ာလညျးမခြိတျရ! COVID 1st wave အစ ကတညျးကပုံလေးတှပေါ😍” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ မြှဝလောပါတယျ။ ပရိသတျကွီးအတှကျ ခတျေနဲ့သဈရဲ့ ခဈြစဖှယျပုံရိပျလေးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ခတျေလေးနဲ့ သဈလေးကတော့ ဦးဦးဒျေါဒျေါ၊ ကိုကို မမတှကေို Mask တှကေို စနဈတကတြပျပွီး စှနျ့ပဈကွဖို့ ခဈြစဖှယျပုံရိပျလေးတှနေဲ့ သရုပျပွလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ခတျေလေးနဲ့ သဈလေးလို Mask ကို စနဈတကြ တပျပွီး၊ စနဈတကြ စှနျ့ပဈဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
” မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ လှသူတွေဖြစ်ကြောင်း မိမိုက်ကာအထာကျလွန်းတဲ့သူမရဲ့ ညီအစ်မတွေကို ထုတ်ကြွာလိုက်တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး”